နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: EZ Link ကဒ်အသစ် အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း (တစ်လုံးအတည့်)။
EZ Link ကဒ်အသစ် အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း (တစ်လုံးအတည့်)။
ခြသေ့င်္ကျွန်းရဲ့ အထင်ကရ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ် ဖြစ်တဲ့ အမ်အာတီ ရထားကို စီးသူတွေ ကြားမှာ အခုတစ်လော ရေပန်းစားနေတဲ့ EZ Link ကဒ် အသစ်အကြောင်းကို ကျွမ်းကျင်သူ နှစ်ယောက် အချီအချ ဒူးတိုက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ အပိုင်းကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ဂရင်းနစ် စံတော်ချိန် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆း၀၀ နာရီ အချိန်လောက်က ဖြစ်ပါတယ်...။
(ဆက်စပ် ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ ပို့စ်တွေကတော့ ညီမူရာ နဲ့ နေနေနိုင် တို့ပို့စ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။)
<<< .Card Exchange Period/ Duration : .09 Jan '09 - 30 Sept '09.>>>
MRT အရေး ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ယောက်၏ ဆွေးနွေးခန်း။
(Greenwich STD time 2009, Jan 10th 18:00 hr)
Boyz: အခု ကဒ်က အက်အမ်အာတီ တက်စီစီးလဲ ပေးလို့ရတယ်။711 မှာ ပေးလို့ရတယ်
Boyz: နောက်တစ်ခြား သုံးလို့ ရတာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ကြည့်ရတာ သူတို့ NETS system ကို မိုနိုပိုလီ လုပ်ချင်တာလား မသိဘူး။
Boyz: နက်စ်မှာ ဝင်သွားမယ့် ပိုက်ဆံတွေကို သူတို့ဆီ ရောက်အောင် လုပ်ပြီး ငွေကို လှည့်သုံးချင်တာ နေမှာ။
Boyz: အဲဒါကြောင့် ခရီးသွားတစ်ယောက်ဆီက အတိုးမဲ့ရထားတဲ့ deposite ၃ ကျပ်ကို အဆုံးခံ ပြန်အမ်းပြီးတော့ ကဒ်စနစ်ကို ပြန်အဆင့်မြှင့်ပြီး သူတို့ထဲ ပိုဝင်လာအောင် လုပ်တာ။ ဒီအတိုင်းတော့ ဘယ် ၃ ကျပ်ကို အလွယ်တကူ လက်လွတ်မှာလဲ။
Boyz: အခုဆို အမ်အာတီကဒ်ကိုင်ဆောင်သူပေါင်းက မီလီယံနဲ့ချီပြီး ရှိတယ်။ အဲဒါကို ၃ နဲ့မြှောက်လိုက်။ ထွက်လာတဲ့ တန်ဖိုးသည် SMRT ကနေပြီးတော့ အလကားအတိုးမဲ့ ရထားတဲ့ ချေးငွေပဲ...။
Boyz: အဲဒိကိစ္စကို တစ်ချို့က complaint တက်တော့ ငွေပြန်အမ်းပြီး NETS ကို monopolized လုပ်ဖို့ ကြံနေတာ
Boyz: စီးပွားရေးသမားတွေနော.....။ နည်းတဲ့ ဦးနှောက် မဟုတ်ဘူး...။
Boyz: ၃ ကျပ် ဒီပိုစစ်တင်တုန်းက ကဒ်ကို အနှုတ်အထိ လက်ခံတယ်။ ခုတော့ လက်မခံဘူးတဲ့။ ကဒ်ထဲမှာ အနည်းဆုံး ၃ ကျပ်ကျန်မှ ခရီးသွားတာ ကောင်းပါတယ် ဘာညာနဲ့ စေတနာ လာပိုနေတာ...။
Boyz: ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီးနဲ့ တူတူပဲ...။
Boyz: အခုတော့ ၃ ကျပ်ကို ဒီပိုစစ်တင်ထားရတယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ပျက်က လွတ်သွားတာပေါ့။
Boyz: ကဒ်ကို နေရာတစ်ကာမှာ သုံးလို့ရအောင် လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ဆီကို Cash Flow တွေ ပိုဝင်လာမယ်။ အဲဒီ ဝင်လာတဲ့ ငွေတွေနဲ့ တစ်ခြားမှာ သူတို့ လှည့်သုံးနိုင်မယ်။
Boyz: သူတို့ အခု ရင်းနှီးရမှာကတော့ ကဒ်အဆင့်မြင့်လိုက်တဲ့ အတွက် ကဒ်ဖိုးနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲဖိုး၊ နောက်ပြီး ကဒ်ကို ဖတ်ဖို့ Card Reader။ ဒါပဲ...။ ကဒ်ဖိုးက ထူးပြီးကုန်ကျတာ မဟုတ်
Boyz: သူတို့က ကဒ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်နေတာ။
Boyz: တစ်ကယ်ကုန်ကျတာက ကဒ်ရိဒ်ဒါတွေပဲ..။ ဒါလဲ နောက်တော့ ငွေပြန်ပေါ်မှာပဲ။ ဆိုင်တွေမှာ ထားမယ်ဆိုရင် သူက စက်အာမခံကြေး စပေါ် တောင်းချင် တောင်းလိမ့်မယ်။ ပထမ ၃-၄ လတော့ စပေါ်ကို ပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့ မတောင်းဘူးပေါ့။
Boyz: လူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးမှာ အခရာကျတာကို ချုပ်ကိုင်ထားတာ
Boyz: လူတိုင်း မသုံးမဖြစ် ဖုန်းကုမ္ပဏီ၊ စားသောက်ကုန်ရောင်းတဲ့ အန်တီယူစီ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း အက်စ်အမ်အာတီ
Boyz: အခရာကျတဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက် အကုန်လုံးကို ကိုင်ထားတယ်။
kom: အင်း.. (စကားကို ထောက်ပေးနေခြင်း)
ksanchaung: hello! seems like uh, the night is still young.
Boyz: တစ်ကယ်လို့ ခု ကိုင်နေတဲ့ ez link ကဒ်တွေကို လူတွေက ကက်ရ်ှကဒ်လို အစားထိုး သုံးလာမယ်ဆိုရင် အခု သုံးနေကြတဲ့ ဘဏ်ကဒ်က ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်တဲ့ NETS စနစ်က ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်တယ်။
kom: ဒါပေမံဲ့အေ. ဘဏ်ကဘန် ပါဘဲ။ ဘန်ကဒ်ဘဲသုံးဖြစ်ဘို့များပါတယ်
Boyz: မဟုတ်ဘူးလေ။ ဘဏ်ကဒ်က ရထားစီးလို့ အဆင်မပြေဘူးလေ။
kom: ဘန်က ဘန်း ရထားကဒ်က ရထားက်ဒ်..
danTanDan: သူများကဒကယ်ဖတ်နေဘာဒယ်ရှိုမှ အဟင့် .. joinထားဒယ်
Boyz: တက်စီစီးရင် နက်စ်နဲ့ ပေးရင် သူက ပင်နံပါတ်တွေ ဘာတွေ နှိပ်ရသေးတယ်။ ခု အီးဇီးလင့်ခ်ကဒ်က ကက်ရ်ှကဒ်လိုပဲ Tap လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပိုက်ဆံကို ကျသင့်သလောက် ဖျက်သွားပေးမယ် သဘောမှာ ရှိတယ်။
Boyz: ဘဏ်ကဒ်က ပိုက်ဆံ ထုတ်တဲ့ အချိန် တစ်ခုမှာပဲ သုံးလို့ရသွားမယ် အခြေအနေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အီးဇီးလင်ခ့်ကဒ်ရဲ့ benefit ကို ဖတ်ကြည့်ရသလောက် သူက အစုံလုပ်နိုင်မယ့် သဘော။ လူတွေက ကဒ်တစ်ခုထဲမှာ အကုန်လုပ်နိုင်မယ်ဆို အဲဒီအစုံလုပ်နိုင်တဲ့ ကဒ်ပဲ ကိုင်တော့မှာလေ။
Boyz: ဒါဆို NETS card, Cash Card တွေ အလားအလာ သိပ်မကောင်းတော့ဘူး...။
kom: အီးကပ်ထဲမှာ ဘာလို့ပိုက်ဆံအများကြီးထည့်ထားမလဲ။ လိုသလောက်ဘဲပေါ့၊
Boyz: အီးကဒ်က နေရာတိုင်းမှာ အလွယ်တကူ သုံးလို့ ရနေတယ် ဆို အမ်းမား အလုပ်ရှုပ်ခံပြီါ် ကဒ်တွေကို သယ်နေမလား။
Boyz: All in One ကဒ်ကိုပဲ သယ်မလား။ လူ့မနောနဲ့ပဲ သေချာစဉ်းစား
kom: ဘန်ကက် က သူများကောက်ရ၇င် သုံးလို့မရဘူး
kom: ပင်နံပါတ် လိုတယ်
kom: အီးကက် က ပင်နံ့ပါတယ် မလိုဘူး
Boyz: ကျွန်တော်သာဆို less hassle ဖြစ်မဲ့ ဟာကိုပဲ ရွေးဖြစ်မှာပဲ။ ERP, Parking Fee, MRT, SMRT Taxi, Seven Eleven, Shopping Mall နေရာ အစုံ သုံးနိုင်မယ်လို့ သူတို့က ကြေငြာထားတယ်...။
kom: သူများကောက်ရ၇င် ကိုယ့်ပိုက်ဆံသုံးသွားမှာပေါ့။
Boyz: ဒါကတော့ ကဒ်မပျောက်အောင် ဂရုစိုက်လေ....။
kom: accident is accident ကိုဘ.
Boyz: NETS Card က MRT စီးလို့ မရဘူး...။ လူတိုင်း နေ့တိုင်း အမ်အာတီ စီးတယ်။
Boyz: အမ်အာတီကဒ် နေ့တိုင်းဆောင်ရတယ်။ ဆိုတော့ အမ်အာတီကဒ်နဲ့ ငွေတွေ အလွယ်တကူ ချေနိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒ့ါကို ရွေးကြမှာပဲ...။
kom: ကဲ ၁၀၀ ဘဲ ထည့်ထားမယ်ကွာ။ ဘန်ကဒ်ကတော့သယ်ဦးမှာဘဲ။ ၁၀၀၀ တော့မထည့်ထားနိုင်ဘူး.
Boyz: သူပေးထားတဲ့ benefit, previlege တွေက မက်စရာတွေ.. All in one..
kom: pros and cons
Boyz: တစ်ထောင်တော့ ဘယ်သူက ကုန်အောင် သုံးမှာလဲ အမ်းမားရာ...။
Boyz: ၅၀၀ အထိပဲ သူက ထည့်ခွင့်ပေးထားတယ်။ အမ်းမား ၁၀၀၀ ထည့်ချင်လဲ သူက လက်မခံဘူး..။
kom: မစန္ဒာ ဝတ်ထူထဲကလိုဖြစ်နေပြီ..
Boyz: 1818 card လိုပေါ့...။ ကဒ်နှစ်ခုပေါင်းတာ ၂၀ ထက် ပိုထည့်ခွင့်မပေးဘူး...။
kom: လုံချည်ကို မိးပူတိုက်တဲ့သူက အတည့်တိုက်တဲ့သူက အတည့်တိုက်တယ်။ တသက်လုံး
Boyz: လုပ်ပါဦး.. နားထောင်နေတယ်
kom: ပြောင်းပြန် တိုက် တဲ့သူက ပြောင်းပြန်မီးပူတိုက်တယ် တသက်လုံး။
kom: ဘယ်လိုငြင်းငြင်း. သူကောင်းတယ် ငါကောင်းတယ်နေ့
kom: နောက်ဆူံး ကေိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ဘီု့ ဆွေးနွေးပြီး ကြေအေးလိုက်ကြတယ်
kom: အခုလဲ ဓီလိုဘဲ
Boyz: ခေါက်ရိုးကျိုး၊ တစ်သက်လုံး အရိုးစွဲလာတာကို လွယ်လွယ်နဲ့ မဖျောက်ချင်တာလား။ အဲဒါက ရှေးတုန်းက အမ်းမားရ
Boyz: အခုခေတ်နောက်ပိုင်း လူတွေက အသစ်အဆန်း၊ အလွယ်နောက်ကို လိုက်တာများတယ်။
kom: အမ်းမားပါဆိုနေမှ. conservative
Boyz: မယုံကြည့်နေပါ။ နက်စ်စနစ်ကို အသုံးချတဲ့ ဘဏ်တွေ တစ်ခုခု လုပ်လာမှာပါ...
kom: boy ဘဲ ခေတ်ရှေ့ကသွား
Boyz: ခုတောင် နက်စ်နဲ့ ၅၀ ဖိုး ဝယ်ရင် ဆူဇူကီး ကားကံစမ်းမဲ ပေးနေတယ်လေ...။ အဲဒါ နက်စ်ဘက်က ဈေးကွက်မပျောက်ဖို့ တိုက်ပွဲအတွက် ခြေလှမ်းတစ်ခု စလိုက်တာပဲ...။
Boyz: အွန်လိုင်းမှာကိုယ်ဝယ်လာတဲ့ နက်စ် ၅၀ ဖိုး ဖြတ်ပိုင်းကို register လုပ်ပြီး ကံစမ်းမဲတွေ ပေးနေတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:48 AM
Labels: ez link card
:P January 11, 2009 at 12:35 PM
ပြောပြောကစောပါလားအေ......ခုနကမှ စီဘောက်စ်က စာလုံးသေးသေးလေးတွေကို ကြွက်နဲ့ တစ်ကြောင်းချင်းထောက်ပြီး
ဖတ်ထားတာ.....မမကေအိုအမ်ကိုထောက်ခံပါသည်။ password မရှိတဲ့
card နဲ့ all in one မသုံးနိုင်ပါ။ ကံစမ်းမဲပေးတာမဖတ်မိပဲကျော်သွားတယ်...။
NTUC မှာ 40 ဖိုးထဲဝယ်လာမိတယ်....eeeeeeeeeeeeee
Ko Boyz January 11, 2009 at 12:41 PM
:P January 11, 2009 at 12:56 PM
အေးပါ... အောလ်အင်ဝမ်းကတ်ကြီး ကျပျောက်မှ
khin oo may January 11, 2009 at 1:10 PM
ဟီဟီး.. ဟုတ်တယ် ကိုကြီးဘွိုင်းဇ်ကောင်းဘူး....းP
နောက်တာ.. ဟီဟီးး.. အဲ့ဒါတွေခုမှပဲ တိတယ်တားတားတော့။
ဂျီးဒေါ်ကလည်းဇွတ်၊ ကိုကြီးဘွိုင်းဇ်ကလည်းဇွတ်၊ ကုမ္ပဏီတွေကလည်း ဇွတ်ရှေ့တိုးမှာပဲ။ ဒါမှသူတို့ များများရမှာလေ။ ကိုကြီးဘွိုင်းဇ်ပြောသလိုဆို အတော်လည်တဲ့သူတွေပဲ။ ဒါကလည်း သူတို့ဈေးကွက်အမြင်ကို.. ဒီလိုတွေတွက်နိုင်တာပဲ လေးစားဖို့တော့ ကောင်းသား။
မေ့သမီး January 11, 2009 at 7:34 PM
အဟိ ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးစဉ်းစားစရာတွေရသွားတယ်။ စီးပွားရေးသမားတွေဦးနှောက်ကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လဲအမလိုပဲ NETS မှ NETS ပဲ။ အီးကဒ်ကတစ်ခါပျောက်လို့အသစ်လုပ်ထားရတယ်။ မသုံးရမစွဲရပျောက်သွားရင် ၅ကျပ်လဲနှမြောတာပဲ။ တစ်ရာမပြောနဲ့။ တစ်ကျပ်တောင်မပျောက်ချင်တော့ အီးကဒ်ကိုအားမပေးဘူး။
Ko Boyz January 11, 2009 at 8:07 PM
ဟားဟား... နောက်ပိုင်းကျရင် အီးကဒ်နဲ့ ပစ္စည်းဝယ်ရင် ၊ ငွေချေရင် ဒစ်စ်ကောင့် ဘယ်လောက်ပေးမယ်၊ အီးမိုင်တွေ ဘယ်နှစ်မိုင် ပေးမယ် ဘာညာနဲ့ မြူဆွယ်လာရင် အဲဒီ ကြောက်နေတာတွေကို ဘေးချိတ်ပြီး အီးကဒ်မှ အီးကဒ်ဆိုတာ ဖြစ်မှာ မြင်ယောင်သေး...။
puluque January 11, 2009 at 9:56 PM
ပညာရှင်နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးခန်းကို လာဖတ်ရှုကာ ကတ်အသစ်အကြောင်း မြည်းစမ်းသွားပါသည်။ ကြားတာကတော့ ကြားနေပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ကတ်အသစ်မလဲရသေးပါ။ လူတန်းစီရမှာ ကြောက်လို့။ နောင် လူပါးသွားမှ လဲမလားလို့. ဒီနေ့တော့ အိမ်က တစ်ကောင်လဲလာတယ်။ q ယူရတာ အကြာကြီးတဲ့ဗျာ...ဘာတွေ ဘယ်လိုကောင်းမလဲ ဘာဟာကွက်တွေ ရှိမလဲ စောင့်ကြည်ရအုံးမယ်။ စလုံးက ခေါင်ပိုင်းက လူတွေပဲ မပိုင်ပဲနဲ့ မလုပ်လောက်ပါဘူး။ ဆင်ကြံ ကြံထားတာပဲ
Ko Boyz January 11, 2009 at 10:00 PM
Card Exchange period/Duration : 09 Jan '09 - 30 Sept '09.
Ko Boyz January 11, 2009 at 10:18 PM
အပေါ်က ပုလုကွေးပြောသော ဆင်ကြံကြံသည် ဆိုသည့် စကားရပ်သည် ဆင်ထုံ ဟုခေါ်တွင်သည့် ဆင်ဒဏ်လားနှင့် လားလားမျှ ပါတ်သက်မှု မရှိကြောင်း ဖြေရှင်းအပ်ပါသည်...
ဟု ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါသလားဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ် ခေါင်းစားနေသည်။ (ခေါင်းစားတော့ ငါ့တစ်ပါး မင်းဖြစ်သည်။ ခြေထောက်စားလျင် ခြေမြန်တော် ဖြစ်မည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းပိုင်းသာ စားချေတော့မည်...။)
shin January 11, 2009 at 11:26 PM
ha ha.... thanks..thanks...learnalot from this post...
TZA January 12, 2009 at 12:54 AM
မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ဒီလိုအတွေးကို မွစိထနေသော ကဒ်ကုမ္ပဏီများ ဟိုးပဝေဏသီကပင် တွေးခဲ့ကြပါလိမ့်မည်၊ ဘွိုက်တွေးရန် အလှည့်ပင် ကျမည်မဟုတ်။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလျှင် လုံခြုံရေးသည်သာ အဓိကဖြစ်သည်။ ယခု အီးဇီးလင့်ခ်ကို အားမနာတမ်း သုံးနေခြင်းမှာ အဆင်ပြေသည်ထက် တခုခုဖြစ်ခဲ့လျှင် ဆုံးရှုံးမှု မများသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်၊ ၅၀၀ ထည့်ထားသည့် ကဒ် ကျပျောက်မှာ စိုးရိမ်ပါက cardshield ဆိုသည့် ကဒ်အာမခံ ထပ်ဝယ်ရပါအုံးမည်၊ အပိုငွေ ထပ်ကုန်ကျမည့်အရေး တွေးပါအုံးလေ၊ ထောင်သောင်းချီသော ငွေတန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသည့် ကဒ်ကလေးကို အဆင်ပြေမှု တခုတည်းနှင့် လူပြိန်းများသာ လဲလိမ့်မည်။
အားမနာတမ်း လိုက်ငြင်းတတ်သော တာဝန်သိပြည်သူတဦး
khin oo may January 12, 2009 at 6:15 AM
kom :ဟုတ်တယ်. ကိုဘွီူက်စ.. ကိုဘွိုက်စ ဟာ လူပြီန်းပါ။ သေချာပါတယ်။ (ကျော်ဟိန်းသီချင်းလေးသာ ဆိုနေလိုက်ပါ။ ငါဟာ လူပြီန်းကလေးပါ...
ဖိုရမ်မှယ ဘယ်ရွာသူများ မာယာသုံးသွားတာပါလ်ိမ့်
juli January 12, 2009 at 10:48 AM
EZ card အသစ်အကြောင်း သေ သေချာချာဖတ် သွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကို boyz (dantandan ရဲ့သတင်းပေးချက်အရ လာရောက် ဖတ်ရှူသူ ပြည်သူတစ်ဦး)
khin oo may July 20, 2011 at 12:26 PM
2 Feb 09, 10:48
သန္တာ: ဟုတ်ကဲ့ တာတာ...........
2 Feb 09, 10:47
mm: လစ်လိုက်အုံးမယ်.တာ့တာ သနာ
သန္တာ: ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကစပြီး လိုက်ရှာပါမယ်။
2 Feb 09, 10:46
kom: thandar အစ်မတို့ကို မတွေ့ရင် ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ရှာပါ။ http://khinoomay77.blogspot.com/
2 Feb 09, 10:45
kom: အစ်မလဲ ကာကာ လုပ်တာ တွေ လုပ်လိုက်ပါဦးမည်။ ပြီးတော့မှ တွေ့တာပေါ့ အစ်မဘလော့မှာ တွေ့လဲရပါတယ်။ အမေတို့ ခွင့်လွတ်မှာပါ. :P
2 Feb 09, 10:44
kom: mm ကလည်း စင်စင် က မနက်လင်း အားကြီး ဘယ်တော့မှ မလာဘူး
2 Feb 09, 10:43
kom: သူပေါတာ ကိုတဲ့
kom: ယောကျာ်းကလေည်း ရိပ်မိနေတယ်တဲ့
mm: အဲဒါ ဆင်စင်မဟုတ်ဘူးလား..
kom: sin sin: em စင်စင်တဲ့နော် လာထား2Feb 09, 06:29 AM sin sin: ရှိပ် ရှိပ် ရှိပ် လိုက်ကြေ
mm: အိမ်သာပါ သွားပါ..အေးအေးဆေးဆေးမှပြန်လာပါ
kom: သူ့နာမည်နဲ့ တစ်ယောက် က ပေါက်တတ်ကရပြောနေလို့။
KLNG: မျက်နှာသစ်လိုက်ပါဦးမည်။မျက်လုံးပွင့်ပွင့်ချင်းမမကိုလိုက်ရှာခြင်းဖြစ်သည်။mm ,မမ ,thandar ခဏနေမှတွေ့ပါမည်
mm: ဟုတ်လား.ဘာဖြစ်နေလို့လဲ သနားပါတယ်
2 Feb 09, 10:42
kom: စင်စင်စိတ်ငြစ်နေတယ။်
2 Feb 09, 10:41
သန္တာ: ဘလော့ပိုင်ရှင်ကြီး သူ့ဘလော့ကို မ၀င်နိုင်သေးဘူး ထင်တယ်နော်။ အလုပ်များနေတယ် ထင်တယ်.
2 Feb 09, 10:40
mm: ဆင်စင်လဲ ရွာရိုးလျှောက်တာ မတွေ့ဘူး
2 Feb 09, 10:39
သန္တာ: ဟုတ်တယ် နည်းနည်းကြာတယ် ။ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရိုက်လေနော် ။ အားနာလို့
KLNG: မမအကြံကိုလဲလက်ခံပါတယ်thandar မင်္ဂလာပါ
KLNG: ဟေးmm ပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လေချစ်မဲ့လူမှမရှိရှာကျတာကိုး။
kom: အောင်မယ် သူက လာကြွားနေပြန်ပြီး
kom:ာာ ပြောတာ ဟုတ်တယ်။
2 Feb 09, 10:38
kom: အစ်မလဲ ရိုက်ရသိတ်ခက်တယ်။eလိုရိုက်ရတယ်။ thandar ဆိုပြီး (တို့ကeကျွမ်းတယ်လေ)
mm: သြော်..ချစ်ပါစေ..သူတို့က မမမှမချစ်ရင် ချစ်မယ့်သူမရှိရှာဘူးလေ..
2 Feb 09, 10:37
KLNG: သန်တာ ပက်ဆင့်ရိုက်တတ်ဘူးဟီးဟီးမာကလာပင်
KLNG: ဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးmm ယုံလားမမဦးဘွိုက်ကိုပိုချစ်တယ်strikeကိုလဲပိုချစ်တယ် :P
သန္တာ: ရပါတယ်။ သန္တာက တစ်ခါတစ်လေမှ မမကို ရင်ဖွင့်တာပါ။ အားလုံးကိုလည်း ခင်ချင်ပါတယ်။
2 Feb 09, 10:36
kom: ကာကာ နဲ့ mm ကိုလဲချစ်တာဘဲ. အားလုံးကိုချစ်တာပါဘဲ။
2 Feb 09, 10:34
KLNG: ဦးဘွိုက်နည့်strike နည့်ကိုပိုချစ်မှန်းသိပါတယ်ဟိဟိ
2 Feb 09, 10:33
kom: အစ်မ ဘလော့ မှာ အစ်မ က အလွမ်းဇတ်ခင်းထားတော့ ပေါက်တတ် ကရရေးရခက်နေတယ။် နေဦး အသစ်တစ်ခုရေးလိုက်ပြီးမှ ပေါက်တတ်ကရပြောမယ်။ မဟုတ်ရင် မိဘတွေ ကို အားနာစရာ
2 Feb 09, 10:32
kom: ကာကာ ဆီလဲ လာမလို့ပါ.ဒီမှာ သံယောဇဉ်လေး ဖြတ်မရတာနဲ့
2 Feb 09, 10:31
KLNG: မမကဦးဘွိုက်ကိုပဲချစ်နေတာကို :zonked:
khin oo may July 20, 2011 at 12:30 PM
2 Feb 09, 10:30
kom: ကာကာ ,,,mm မင်္ဂလာပါ
mm: သြော်.. ပျောက်နေတယ်ထင်လို့
2 Feb 09, 10:29
KLNG: အင်mm ချစ်ချစ်
KLNG: မမအိမ်ပြန်လာပါလေ။ :zonked:
2 Feb 09, 10:25
2 Feb 09, 10:24
2 Feb 09, 10:23
သန္တာ: တကယ်တော့ သမီးတုန်းတယ် မမရယ် ။ ဘလော့ဆိုတာလည်း စငိကာပူရောက်မှသိတာ ဖတ်ဖူးတာ။ ရောက်တာကလည်း သိပ်မကြာသေးဘူးလေ။
khin oo may July 20, 2011 at 12:31 PM
2 Feb 09, 10:20
သန္တာ: ဟုတ်လား အခုမှ သိတယ် မမ ။ကျေးဇူး
2 Feb 09, 10:15
kom: ကိုဘွိုက်စ သိရင် thandar ကို one of the ထုံ ညီအစ်မများ list ထဲ ထည့်လိုက်လိမ့်မယ်။
2 Feb 09, 10:14
kom: စာရိုက်တဲ့ ညာဖက် လက် go ရဲ့ အပေါ်နားမှာ join ဆိုတာ ကလစ်ထားလိုက်ရင် chat box ဖြစ်သွားရော။. ဘယ်သူသင်ပေးလဲ မမေးနဲ့ သတ်လိုက် မပြောဘူး။
2 Feb 09, 10:13
kom: ဟား ဟား.ဟား
2 Feb 09, 10:10
သန္တာ: ဟုတ်မမ ...။ cox က gtalk လိုသူ့ဘာသာတက်လာရင်ကောင်းမယ်နော် မမ။ refresh လုပ်မှတက်တော့ နည်းနည်းကြာတယ်။ မြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လည်း မမသိလား။
2 Feb 09, 10:03
kom: အာ.. ညီမ လေ့လာကြည့်ပါလား အစ်မ က လူတွေ ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ စကားလုံး ကနေပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတယ်။ စရိုက်ဘယ်လို ရိမလဲ တွေးခေါ်ကြည့်တယ်။
2 Feb 09, 10:01
သန္တာ: ဟားဟား...မမကတော့လုပ်ပြီ ။ ဦးဘွိုင်းဆို ငယ်နိုင်ကျနေတာပဲ ။
2 Feb 09, 09:56
kom: ဘာမှ အားနာစရာ မရှိ ..ကို ဘွိုကစ် က သိတ်သဘောကောင်းတယ။် မိန်းကလေးတွေ ကို ဆို ပို သဘောကောင်းသေးတယ်
2 Feb 09, 09:53
သန္တာ: စိတ်ညစ်တယ် မမရယ် ။ သူများ cbox မှာလာပြောရတာ အားနာတယ်။ ဒီကိုလာတော့ စိတ်ကနည်းနည်းပျော်တယ်လေ။
2 Feb 09, 09:50
kom: ဟုတ်တယ်။ တစ်ခါ တစ်လေ အားလုံးကို မေ့ပစ်လိုက်တယ် ပြီးတော့ မှ အသစ်ပြန်စ..စဉ်းစားမိတယ်။
kom: PR ကလည်းလျောက်ပေါါ်ညီမရယ်။
သန္တာ: တွေးကြည့်ရင် စိတ်ညစ်လို့ တစ်ခါတစ်လေ မေ့ထားတယ်။
2 Feb 09, 09:49
သန္တာ: ကျောင်းကလည်း မေလမှ တက်ခွင့်ရတယ် မရဘူးသိရမှာ ...။PR ကလည်း လျှောက်ရင်ကောင်းမလား မကောင်းဘူးလား စဉ်းစားတာနဲ့တင် အချိန်ကုန်နေတယ်။ အလုပ်သစ်ပြောင်းပြီးမှ လျှောက်မလို့။အလုပ်သစ်ကလည်း အဆင်မပြေ
2 Feb 09, 09:45
သန္တာ: အင်း ဟိုနေ့က meeting လုပ်တယ်. မတ်လကုန်မှာ project တွေပြီးပြီတဲ့ ...ဒါပေမယ့် အစိုးရဆီက 80% ချေးငွေရတယ်တဲ့.၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာအထိပေါ့နော် .ဒီကြားမှာ သင်တန်းတွေ ၊ ကျောင်းတွေတက်ချင်ရင် ညှိပေးမယ်လို့ပြောတယ်
2 Feb 09, 09:39
kom: ဦးဘွိုင်း ကတော့ ညကတည်းက taxiခ ကြိုထုတ်ထားမှာပါ။ သူ့အကြောင်းသူသိပါလိမ့်မယ်။
2 Feb 09, 09:38
kom: နောက်အလုပ်တစ်ခု ကြိုကြည့်ထားပေါ့ thandar..အဆင်ကတော့ဒီလိုဘဲပြေသွားပါလ်ိမ့်မယ်. တစ်ခါ တစ်ခါ အလုပ်မရှီပေမဲ့လဲ ရျိတဲ့ staff ကို ထိန်းထားချင်တော့ ဒီလိုဘဲ ဆက်ထားရပါတယ်။ အစ်မ ခွင့်ယူထားပါတယ်းဒီနေ့
2 Feb 09, 09:34
သန္တာ: မမ မေးခွန်းတူနေတယ်...။ အလုပ်မှာပါ မမ ။ အလုပ်မရှိဘူးလေ...။အေးဆေးပဲ ဘယ်နေ့မြန်မာကိုပြန်တော့လို့ ပြောမလဲမသိဘူး။ နီးတော့နီးနေပြီထင်တယ်။
khin oo may July 20, 2011 at 12:36 PM